Jiilka saddexaad ee AirPods oo wata nashqadda Pro iyo $ 200 | Waxaan ka socdaa mac
Tani waa waxa xanta ugu dambeysay ee ku saabsan imaatinka AirPods cusub ay muujineyso hadda, kuwa noqon lahaa jiilka saddexaad waana taas sababta oo ah waxay kaga hadlayeen shabakadda bilo. Kiiskan Elec ka hadal qeybtii hore ee sanadka 2021 ee AirPods leh naqshad Pro laakiin xoogaa ka raqiisan oo aan laheyn buuq firfircoon sidoo kale lagu sharaxay webka MacRumors.
Xogta ku saabsan imaatinka diyaaradahan AirPods Pro ee suurtogalka ah waxay ka yimaadeen meel fog waxayna noqon kartaa wax aan ugu dambeyntii aragno bisha Maarso ee sanadka soo socda. Caqli ahaan taariikhaha la bilaabayo suurtagal ma ahan laakiin Ming-Chi Kuo iyo falanqeeyayaal kale ayaa horey ugu wacdiyey warkan kahor dhamaadka qeybtii hore ee 2021.
New AirPods Pro iyo AirPods Pro Lite
Xanta ayaa si toos ah u tilmaamaysa isbeddelka jiilka ee AirPods Pro ee hadda jira iyo nooc kale oo noqon lahaa kan leh qiime ka yar $ 200 oo aan ku dari doonin joojinta buuqa firfircoon. Tani waa arrin tixgelin siineysa waana arki doonaa haddii ugu dambeyntii aysan kala goyn doonin qeexitaannada kale maxaa yeelay farqi weyn ayaa u dhexeeya qiimaha caadiga ah ee Pro iyo tan loo maleynayo Lite.
Taariikhda la siidaynayo ma cadda, farqiga u dhexeeya AirPods-ka caadiga ah iyo Pro ma cadda, sidaa darteed illaa iyo inta ay wararku sii socdaan waxaan sii wadi doonnaa shakigaas. AirPods-ka cusub wuxuu yimid bishii Oktoobar 2019 illaa iyo maanta lama cusbooneysiin, laakiin xaaladda AirPods taariikhdu waa Maarso sidaa darteed waa bishaas markii aan arki karnay dhagaha dhagaha ee Apple-ga cusub. Xilligan la joogo bisha Diseembar waxay durbaba warkooda ku billaabeen AirPods Max-kooda cusub, sameecadaha dhagaha ayaa gebi ahaanba ka duwan kuwa AirPods iyo AirPods Pro laakiin taasi waxay sidoo kale loo tiriyaa inay tahay wax cusub sannadkaan 2020. Muxuu Apple na tusi doonaa Maarso 2021?
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Jiilka saddexaad ee AirPods oo leh naqshad Pro iyo 200 doolar
Nooca cusub ee Firefox ayaa hadda la jaan qaadaya Apple Silicon